युजिएसएको भ्रमणका महत्व र सन्देशहरु - Milan World News
Homeअन्य | OTHER LINKआलेख | ARTICLEयुजिएसएको भ्रमणका महत्व र सन्देशहरु
युजिएसएको भ्रमणका महत्व र सन्देशहरु
ई. रोशन गुरुङ: गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण गर्ने उदेश्यले अमेरिकामा स्थापित एक गुरुङ संस्थाको नाम हो– युजिएसए(UGSA) । युजिएसए भन्नाले “United Gurung Society Of America” बुझिन्छ । गत भदौ र असोज महिनामा युजिएसएका पाँज जना व्यक्तित्वहरु अध्यक्ष प्रदिप गुरुङ, उपाध्यक्ष एन्बी गुरुङ, सल्लाकार गङ्गाराम गुरुङ, विदेश विभाग प्रमुख पदम गुरुङ र पत्रकार सहज गुरुङले संयुक्त रुपमा नेपाल भ्रमण गर्नुभयो । एक महिने भ्रमणको उदेश्य गुरुङ मौलिक संस्कृतिको अध्ययन-अनुसन्धान गर्नु थियो ।
अमेरिका जस्तो व्यस्त जीवनमा अभ्यस्त उहाँहरुलाई महिनौं दिन घरपरिवार, जागिर, व्यवसाय इत्यादि सम्पुर्ण जिम्मेवारीबाट टाढिनु अवश्य पनि कम चुनौतिपुर्ण थिएन । तर मौलिकताको लागि चुनौति सामना गर्नुभयो । विभिन्न गुरुङ गाऊँहरुको भ्रमण, भेटवार्ता, छलफल, अन्तरक्रिया, अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउदै मौलिक संस्कृति गहिराईबाट बुझने प्रयास गर्नुभयो । व्यक्तिगत रुपमा, म उक्त गतिविधिबाट अत्यन्तै प्रभावित छु । खुशी छु । गुरुङ संस्कृतिको अध्ययन -अनुसन्धान अति नै जरुरी छ । तर अहिले नभइरहेको अवस्थामा उहाँहरुको भम्रणले मलाई पनि अध्ययन-अनुसन्धान गर्न थप उर्जा मिलेको छ । सम्पुर्ण टिमप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।
बाहिरबाट हेर्दा, भ्रमण युजिएसएका पाँच जना समुहको देखिन्छ । तर, केवल ५ जनामा सीमित छैन । भ्रमणको महत्वका दायराहरु धेरै फराकिला छन् । सम्पुर्ण गुरुङ समुदायमा नै यसले विशेष महत्व राख्न सक्तछ । अध्ययन-भ्रमण भएको हुनाले लिनु पर्ने सन्देशहरु धेरै छन् । त्यसैले केही लेख्न मन लाग्यो । त्यो भन्दा पहिले भाषा, संस्कृतिबारे थोरै प्रकाश पार्न चाहन्छु ।
भाषा, संस्कृति किन महत्वपुर्ण हुन्छ ?
मान्छेलाई जनवार भन्दा उच्च बनाएको उसको भाषा, संस्कृतिले नै हो । संस्कृति नहुने हो भने मान्छे र जनावर बराबार नै हुन्छ । लाखौं वर्ष अघि जब मान्छेको भाषा, संस्कृति विकसित भइसकेको थिएन, त्यो बेला मान्छे जनावरभैm निरिह नै थियो । वतावरणमा मान्छेको कुनै प्रभाव हुन्थेन । मान्छेलाई सक्षम बनाएको भाषा, संंस्कृतिले नै हो ।
बरु जनावर जन्मने बित्तिकै हिड्न सक्छ । खाना सक्छ । डुल्न सक्छ । तर मान्छेसंग त्यो क्षमता हुदैन । जन्मदा मान्छे जनावर भन्दा कमजोर भएर जन्मिन्छ । तैपनि पछि जनावर भन्दा सक्षम भएर हुर्किन्छ । किन ? किनकी मान्छेलाई संस्कृतिले मजबुत बनाउछ । कसरी ?
संस्कृतिभित्र हजारौं वर्ष अघिको ज्ञान, सीप, अनुभवहरु हुन्छन् । मान्छेले छोटो समयमा ती ज्ञान, सीप, अनुभव सबै हासिल गर्न सक्तछ । तर जनावरसंग संस्कृति हुदैन । त्यसैले ज्ञान, सीप पाउन सत्तैmन । सदा कमजोर हुन बाध्य हुन्छ । गुरुङ भाषा, संस्कृति अहिले लोपउन्मुख अवस्थामा छ । भाषा, संस्कृति लोप हुदा हजारौं वर्ष अघिका हाम्रो ज्ञान, सीपहरु सबै लोप हुन्छन् । लोपउन्मुख यो अवस्थामा युजिएसए टिमले मौलिक संस्कृतिको खोजी गर्नु अति नै उदाहरणीय काम हो ।
भ्रमणका महत्व र सन्देशहरु
१. भाषा, संस्कृति हाम्रो पहिचान हो । यसको विशिष्ट महत्व छ । तर हामी गम्भीर ढङ्गले बुझिरहेका छैनौं । युजिएसएको भ्रमणले भाषा, संस्कृतिको महत्व हामी सबैलाई बोध गराएको छ । आफनो मौलिकताको महत्व सदा थाहा पाइरहनु पर्दछ भन्ने राम्रो सन्देश हामीलाई मिल्दछ ।
२. अमेरिका विश्वकै शक्तिशाली देश हो । धनी देश हो । धेरैले अमेरिकालाई आफनो सपनाको देशको रुपमा लिने गर्छन् । तर उहाँहरुको सपनामा भने मौलिक संस्कृति सल्बलाउछ । आफनो संस्कृतिको अत्याधिक माया छ । मोह छ उहाँहरुलाई । दुनियाँको सपनाको देश अमेरिकामा हुनुुहुन्छ । तैपनि आफनो संस्कृति बिर्सनु भएको छैन । विभिन्न बाहनामा हामी मौलिक संस्कृति बिर्सिरहेका हुन्छौं । मौलिकता सहजै ओझेल पर्ने चीज होइन । जुनसुकै सपना होस्, पुरा गर्नु पर्दछ । तर आफनो सपनाको नाउमा आफनो संस्कृति कहिल्यै बिर्सन हुदैन भन्ने सन्देश भ्रमण टिमबाट पाउन सकिन्छ ।
३. संस्कृतिको संरक्षण गर्न स्वदेशमा हुुनु पर्छ भन्ने हुदो रहेनछ । विदेशमै हुनु पर्छ भन्ने पनि होइन । संसारको जुनसुकै भुभागमा होस्, आफनो संस्कृतिप्रति योगदान दिन सकिन्छ भन्ने सन्देश पाउन सकिन्छ ।
४. अहिलेको भुमण्डलीकृत अवस्थामा संस्कृति संरक्षण गर्न पर्याप्त अध्ययन-अनुसन्धान जरुरी छ । गुरुङ समुदायमा अध्ययन- अनुसन्धानको एकदमै अभाव छ । युजिएसएको अनुसन्धानात्मक कार्यबाट हाम्रो ध्यानलाई अनुसन्धान तर्पm मोड्न महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको छ ।
५. गुरुङ समुदायमा ठुलो धनराशी मनोरञ्जनमा खर्च हुन्छ । कार्यक्रम, भेटघाटहरु धेरै हुन्छन् । तर सिर्जनशील, उपलब्धीमुलक हुदैनन् । युजिएसए टिमले आफनो भ्रमणलाई मनोरञ्जनमा बिताउन पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यसो गर्नु भएन । अनुसन्धानमा केन्द्रित गर्नुभयो । अब गुरुङ संघसस्थाहरु बढी भैंझगडामा होइन । मनोरञ्जनमा होइन । बरु पैसा र समयको खर्च बढी सिर्जनशील, उपलब्धिमुलक कार्यक्रमहरुमा गर्नु पर्दछ भन्ने सन्देश भ्रमणबाट मिल्दछ ।
६. उहाँहरुले असाध्यै चिन्तित भएर विभिन्न गुरुङ संघसंस्था, व्यक्तित्वहरुलाई समसमायिक प्रश्नहरु गर्नु भयो । जस्तै हाम्रो धर्म के हो ? मौलिक संस्कृति के हो ? संस्कृति कसरी जोगाउन सकिन्छ ? अमेरिकामा कसरी अर्घुम गर्न सकिन्छ ? इत्यादि । अहिलेको समय धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । हाम्रो दुई पुस्ता(पिढिँ) बीच नै धेरै गम्भीर खाडलहरु देखिएका छन् । ती खाडलहरु पुर्न गुरुङ संस्थाहरु जिम्मेवार भएर लागेको देखिदैन । ती प्रश्नहरुले गुरुङ सस्थाहरुलाई जिम्मेवारपुर्वक चल्न दिशानिर्देश गरेका छन् ।
७. भ्रमणको क्रममा उहाँहरुले मौलिकताको खोजी त गर्नुभयो नै । संगसंगै वोन म्यारो पिडित स्व.सुनिता गुरुङ, मृगौला पिडित राधा गुरुङ लगायतलाई सहयोग गर्नुका साथै अन्य सामाजिकहरु काम पनि गर्नुभयो । यो अति नै प्रशंसनीय काम हो ।
फ्रान्सेली दार्शनिक तथा समाजशास्त्री बोर्जोका अनुसार capital (पुजीँ) भनेको केवल आर्थिक मात्र हुदैन । Capital चार प्रकारका हुन्छन् । १. Economic capital (धन, सम्पत्ति), २. Cultural capital (संस्कार, ज्ञान, मुल्य–मान्यता), ३. Social capital (सञ्जाल, सम्बन्ध), र ४. Symbolic capital (ईज्जत, प्रतिष्ठा) । प्रायः मान्छेको जीवनमा कुनै एक पुजीँले मात्र स्थान पाएको हुन्छ । ऊ कुनै एक पुजीँलाई मात्र पुर्ण ठान्छ । तर त्यो भ्रम हो । युजिएसए टिमले चारै पुजीँलाई सन्तुलनमा ल्याउनुभएको छ । यो असाध्यै मननीय कुरा हो ।
अन्तमा, जीवनका प्रत्येक घटना र क्षणहरुले हामीलाई कुनै न कुनै सन्देश दिइरहेको हुन्छ । हाम्रो वरिपरिका सन्देशहरुलाई अवलम्बन गर्नुको फाइदा, बिना नोक्सान हाम्रो जीवनलाई सार्थक र सहज बनाउदै लान्छ । युजिएसएबाट लिनुपर्ने अरु धेरै सन्देशहरु छन् । मुख्य सन्देश गम्भीर भएर मौलिक संस्कृति संरक्षण गर्नु हो । हामीले अध्ययन- अनुसन्धानमा बढी ध्यान दिनु जरुरी छ । अनुसन्धानले सफलताको भित्री रहस्य बुझन सघाउछ । अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने ? हाम्रो हातमा छ । त्यसैले हाम्रो सफलता, हाम्रै हातमा छ । धन्यवाद ।
नोट : ई. रोशन गुरुङ हाल प्रदर्शनमा रहेको गुरुङ चलचित्र “सिमि नासा” का लेखक हुन् ।
Previous articleनेपाल ह्याण्डबलको राष्ट्रिय टिमको हाई अल्टिच्यूड ट्रेनिङ म्याग्दीमा सम्पन्न
Next articleमुख्य मन्त्री गुरुङले पोखरा रंगशालाको निरिक्षण गरे